SAWIRRO:- Magaalo Sacuudiga ku taalla oo la Aaminsanaa inay Habaar qabto | Radio Balcad
Home WARARKA MAANTA SAWIRRO:- Magaalo Sacuudiga ku taalla oo la Aaminsanaa inay Habaar qabto
SAWIRRO:- Magaalo Sacuudiga ku taalla oo la Aaminsanaa inay Habaar qabto
Magaaladda Hegra ayaa ahaan jirtay magaalo taariikhi ah oo ku taalla Waqooyiga-Galbeed ee Gacanka Carbeed.
Hegra ayaa waxay ka tirsan Dalka Sacuudi Carabiya waxaa lagu arkaa waxyaabo iyo raadad ku taariikhyesan xilli aad u fog.
Qabaa’il ayaa goobtaasi ku noolaan jiray kunkii sano ee ugu horreeyay taariikh xisaabeedka (dhalashadii Ciise ka hor).
Laakiin waxay aad caan ugu tahay haraadiga dadkii boqortooyada madaxa bannaaneyd ee Nabataean-ka iyo qabuuraha dhismaha layaabka leh loo sameeyay ee ku yaalla dhulka lamadagaanka ah. Boqortooyadaasi waxay jirtay qarnigii ugu horreeyay ee taariikh xisaabiyaha(dhalashadii Ciise ka hor). Jerome Rohmer, waa khabiir ku xeel dheer taariikhda dadkii hore.
Isagoo sharraxaad ka bixinaya waxyaabaha lagu xasuusto goobtan ayuu yidhi: “Dabayaaqadii qarnigii 1-aad ee(dhalashadii Ciise ka hor).
dadka loo yaqaanno Nabataean-ka ayaa halkan yimid, oo soo dagay Magaaladda Hegra waxayna horumariyeen magaalada, xilligaasna waxay u badan tahay inuu maamulayay mid ka mid ah boqorradoodii ugu waaweynaa ee la odhan jiray Aretas-kii afaraad. Dadkani waxay goobtaas uga tageen dhammaan qabuurahoodii waaweynaa.”
Previous articleCiidamadda Booliiska Dalka Panama oo Qabteen Labo qof iyo Gaari siday Maandooriye
Next articleSAWIRRO:- Wiil u Dhashay Dalka Malaysia oo Sheegay in Taleefankiisa Gacanta oo maalmo ka maqnaa uu ku arkay Sawirrada iyo Muuqaallo daanyeerro uusan Ogayn Cidda qaaday ama Duubtay
Ilhan Omar oo Ciidamadda Booliiska ku dhaleeceysay isticmaalka rasaasta cinjirka...